Choose your partner who is good for you. Not good for your parents. Not good for your image. Not good for your bank account. Chose someone who’s going to make your life emotionally fulfilling.
ဘဝအတွက်ကြင်ဖော်ကြင်ဖက် လက်တွဲဖက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုးလူမျိုး ကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကို အလင်းပြထားတဲ့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ တစ်သက်တာလုံး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက် ဘဝအတွက်လက်တွဲဖော်ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ် ခြင်းမေတ္တာအရကိုပဲဖြစ်စေ ဘဝအတွက် ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ဆိုးတူကောင်းတူရှိနေပေးမယ့်သူကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ မှားယွင်းပြီး ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမိဖို့သိပ်ကိုမှလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံးကိုယ့်အနားမှာရှိနေမယ့် ဘဝရဲ့ကြင်ဖော်ကြင်ဖက်ဆို ရင် ပိုပြီးတော့တောင် သတိထားရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြုပြီးသွားရင် ပြန်ပြင်ဖို့ခက်တဲ့အထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ဘဝလက်တွဲ ဖော်ရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဖက်ဖက်က စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှ ရွေးချယ်တာက အ ကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘယ်အရာကိုပဲလုပ်လုပ် မျက်စိတစ်ဆုံးမျှော်ကြည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ မျက်တောင်မွှေးတစ်ဆုံးသာကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မိပြီး တစ်ဘဝလုံးနောင်တရနေရတာမျိုးဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝအတွက်ပဲ နစ်နာမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဖုံး ကွယ်ထားတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ ခဏတာတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုတွေကနေ နောင်တတရားတွေကိုသာ ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဖက်သားနဲ့ တစ်ဖက်သားပေါင်းသင်းရမယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးစာအတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် အစစ် မှန်ဆုံးသောသူကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူက ကိုယ်နဲ့ တစ်ဘဝလုံးရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တခြား သောအရာတွေထက် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကို အကောင်းမွန်ဆုံးရှိနေမယ့်သူကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း လောကရဲ့အခက်အခဲတွေကို အတူတူရင်ဆိုင်ရမှာ ကိုယ်နဲ့သူပါပဲ။ ငွေကြေးတွေ၊ ဥစ္စာဓနတွေဆိုတာက နှစ်ဦးပေါင်းပြီး ကြိုးစားလို့ရနေတဲ့အတွက် ငွေကြေးဥစ္စာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း ရွေးချယ်မိတာမျိုးမလုပ်မိဖို့လည်းလိုပါ တယ်။ ဒါမှသာ ရွှေဘုံပေါ်မှာစံပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အဖြစ်ကနေ ဝေးကွာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးတဲ့အခါမှာ သင့်အပေါ်မှာကောင်းနိုင်မယ့်သူကိုသာရွေးပါ။ သင့်မိဘအတွက် သင့်ရဲ့ပုံရိပ်အတွက် သင့်ရဲ့ ဘဏ်စာရင်းအတွက်ကောင်းတာတွေထက် သင့်ဘဝကို နှစ်နှစ်ကာကာပေးဆပ်နိုင်မယ့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ။